सभामुख महराले निष्पक्ष भूमिका निभाउन सकेनन्ः नेता डा.नारायण खडका « News24 : Premium News Channel
सभामुख महराले निष्पक्ष भूमिका निभाउन सकेनन्ः नेता डा.नारायण खडका
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गरेको । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले संसदको गरिमा घटाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधका बाबजुत संसदले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरो अभिव्यक्तिहरुलाई वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको जवाफ दिन्छु भनेपछि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिए लगत्तै कांग्रेसका सांसदहरुले प्रश्न तेस्र्याउन सुरु गरेका थिए ।
जवाफ दिन रोष्टममा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश, कुन्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरुको वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको जवाफ प्रस्तुत गर्छु भने लगत्तै कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो । त्यस्तै कांग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाइरहेकै समयमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले नीति तथा कार्यक्रमको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएको थियो ।
यसै विषयमा न्युज २४ टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति ६ प्रश्नमा कुराकानी गर्दै नेता डा. खड्काले भन्नुभयो, ‘उहाँले प्रयोग गर्नु भएको शब्दहरु प्रधानमन्त्रीको गरिमालाई कायम गर्ने खालको थिएन । उहाँले आक्रोश, कुण्ठा, निम्छरा लगाएत प्रश्नको उत्तर दिन्न भनेर भन्नुभयो ।’
साथै सभामुख कृष्ण बहादुर महराले निष्पक्ष भूमिका निभाउन नसकेको भन्दै नेता डा. खडकाले आलोचना पनि गर्नुभएको छ । बाँकी कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस्ः
access_time 5:54 pm
राजन परियार, सिन्धुली, १६ फागुन । सिन्धुलीमाढीमा ‘सिन्धुलीगढी राष्ट्रिय व्याडमिन्टन प्रतियोगिता’ सुरु भएको छ ।